Egwuregwu Elephant - Atụmatụ Echiche Echiche
1. Elephant egbu egbu n'akụkụ eme ka nwa agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ ọnyá elephant n'akụkụ ha n'afọ na -emepụta ink ojii; egbu egbu egbu a na-eme ka ha maa mma
2. Egwuregwu na-egbuke egbuke na -eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahụ ure na-acha elephant na ubu. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị mma
3. Elephant egbu egbu n'apata ụkwụ eme ka nwanyi yie anya
Ụmụ agbọghọ Brown na-ahụ afụ ụfụ na apata ụkwụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
4. Elephant egbu egbu na ọkara aka mee ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahọrọ egbu egbu nke Elephant na ọkara aka ya na-eji ejiji ink na-acha uhie uhie iji mee ka anya ha mara mma
5. Egwuregwu na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-ahụ akara egbugbere ọnụ nke Elephant na nhazi ime ink na-acha aja aja na azụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
6. Elephant egbu egbu na azụ eweta ihu mara mma
Umu nwanyi choro ima onu ogugu ha n'azu; egbu egbu egbu a na-eme ha ka ha dị mma ma dị mma
7. Elephant egbu egbu n'apata ụkwụ enye ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, ma na-eyi obere uwe na obere mkpịsị aka ga-aga maka egbugbere ọnụ Elephant n'akụkụ akwara ha ka ha mee ka ụmụ nwoke mara mma.
8. Egwuregwu na-acha azụ na azụ na-eme ka ụmụ agbọghọ mara mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-enwe mmasị na egbugbere ọnụ Elephant na azụ ha; egbu egbu egbu a na-eme ka ha na-adọrọ adọrọ
9. Na-eme Chi nke Chineke egbu egbu na ụkwụ iji mee ka ọ mara ya
Ụmụ agbọghọ na-eme ka akpịrị elephant na ụkwụ na-egosi ụkwụ ha ma mee ka ọ bụrụ ebe dị mma
10. Egwurugwu elephant na ubu na-eme ka nwanyi yie anya
Ndị inyom na-eyiri uwe ojii na-enweghị aka na-ahụ n'anya egbugbere ọnụ Elephant na mkpịsị ink ojii; Ejiji egbu egbu a na-ejikọta elu ojii iji mee ka ha maa mma ma mara mma.
11. Ọnyà elephant nke dị n'akụkụ apata ụkwụ na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka egbuke egbuke Elephant nke dị n'apata ụkwụ. Ejiji egbu egbu a mara mma.
12. Egwurugwu elephant na ubu na-eme ha ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ na-ahụ ure elephant na ubu ya na ejiji ink pink na-eme ka ha mara mma ma mara mma
Geometric Tattoosenyí egbu egbuegbu egbu osisi lotusakara ntụpọrip tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọegwu egwuakpị akpịegbu egbuokpueze okpuezeaka akaechiche egbugbundị na-egbuke egbukena-egbu egbuazụ azụudara okooko osisiegbu egbu egbuegbugbu egbugbuNtuba ntugharin'olu oluUche obiAnkle Tattoosenyi kacha mma enyimma tattoosna-adọ aka mmaaka akaegbu egbu diamondmehndi imewekoi ika tattooegbu egbu okpuegbu egbu maka ụmụ nwokendị mmụọ oziụmụnne mgbuọnwa tattoosarịlịka arịlịkaakwara obiỤdị ekpomkpaEgwu ugodi na nwunyeagbụrụ eboima ima mmaaka mma akannụnụụkwụ akaegbu egbu hennangwusi pusizodiac akara akaraọdụm ọdụmegbu egbu ebighi ebiegbu egbu mmiri